10 Maitiro Ekutarisa muDhijitari Kushambadzira ya2016 | Martech Zone
Tine huru yekushambadzira podcast inouya kwatinokurukura shanduko dzinoshamisa dziri kuitika mukati mezvemukati mekutengesa nzvimbo yedhijitari kushambadzira. Asi kushambadzira kwedhijitari kunoenderera mberi kuburikidza neshanduko dzinoshamisa zvakare. Iyi infographic kubva Cube inonongedzera ichangoburwa iyo vatengesi vanofanirwa kunge vachicherekedza mu2016.
Heano gumi Maitiro muDhijitari Kushambadzira
Dzoka Investment - iyo infographic inotaura nekupfuura zvisina maturo matriki senge traffic uye masheya, asi ini ndinotenda maitiro ekutarisa akavandudzwa basa mukati analytics zvishandiso.
Funga Pasi Pose Panzvimbo Yemunharaunda - mitauro yakawanda, chaiyo-nguva dudziro, uye kudyidzana kwenyika zvese izvi zvinoita kuti kutengeserana kuendere pasi rose. Pasina kutaura kuti kutumirwa kwatove kuchitsigira.
Personalization - kubatanidzwa uye shanduko mitengo inowedzera kana mameseji akagadzirwa zvichienderana nenguva, maitiro, huwandu hwevanhu uye nzvimbo yemutengi.
Kubuda kweData Sayenzi - hombe data tekinoroji yave kuwanikwa kune ruzhinji uye madiki uye epakati-saizi mabhizinesi ari kuwana mukana wekufanofungidzira data ivo ivo vasina kumbofungidzira kuti ungakwanise.
Mobile Kukoshesa - nharembozha, nhepfenyuro, vhidhiyo, kubhurawuza nhare, kubhurawuza nzvimbo-based… nharembozha yave pakati pekubatana kwedu padandemutande.
Influencer Marketing - kutsvaga vanhu vane yako tarisiro uye kushanda navo kukurudzira vateereri vane mibairo inoshamisa sekuratidzira uye kutsvaga kwekuita kuchipera.
Kuwedzera uye Virtual Reality - Cube ichangobva kutaurwa nezvayo, asi ini handina chokwadi chekuti ichave yakakura kuita seyakawedzera chokwadi. Iko kugona kusimudzira kubatana kwedu nenyika yatiri kurarama kunoratidzika kunge kune mikana yakawanda mumaonero angu.
App Indexing - maturusi ekuvaka kubatsira vashanyi anofanirwa kuve epakati kuvapo kwekambani yega yega kushambadzira. Isu takavaka Calculator yekushandura unit yemakemikari anogadzira ayo ave akanakisa muindasitiri yavo uye anoshandiswa nemunhu wese mumusika wavo wekutungamira - zvichitungamira kukuziva kukuru uye kutendeuka.
Wearable Technology uye IoT - Kushambadzira kwenzvimbo uye kunongedza kweanogona kupfeka matekinoroji inopa mukana wakanaka kumakambani kune ese ari maviri kusangana uye kusundira mameseji akananga uko tarisiro kana mutengi ari kuteerera.
Omni-Channel Kushambadzira - Kubatana kwekushambadzira kwepamhepo uye kwepamhepo kwakashanduka Iko kutodzosa kumwe kutsika kwetsika uko meseji yako inonzwika nekuda kwekuti hapana makwikwi akawanda.
Tags: 2016Augmented realitybig datadata sciencedigitaalinen kushambadzira maitirokutengeserana kwepasiresekushambadzira kushambadziraIndaneti zvinhuiotYeMahara neThebhu Kushambadziramobile app indexingMobile AppsPersonalizationdzoka pakudyaraRoyiMaitiromaitiro ekutarisahunyanzvitekinoroji inopfeka
Huwandu hwevanhu hwepaInternet Grocery Shopper